Manazava ny fomba hanesorana ny data amin'ny pejy HTML ao anaty rakitra PDF ny Semalt
Ity lahatsoratra ity dia hitondra anao amin'ny dingana manaisotra ny angon-drakitra avy amin'ny pejy HTML anao ary mampianatra ny fampiasana ny vaovao hanamboarana rakitra PDF. Ny dingana voalohany dia ny mamaritra ny fitaovana sy programa fampiasana programa izay hampiasainao amin'io asa io. Amin'ity tranga ity, tsara kokoa ny mampiasa ny rafitra Mojolicious an'i Perl.
Ity rafitra ity dia mitovy amin'ny Ruby amin'ny Rails na dia misy endri-javatra fanampiny izay mety mihoatra ny zavatra antenainao. Tsy hampiasa io rafitra io izahay hamoronana tranonkala vaovao fa hamoaka vaovao avy amin'ny pejy efa misy. Ny Mojolicious dia manana endri-javatra miavaka mba haka sy hanarahana ny pejy HTML. Haka anao ho 30 segondra ny fametrahana ity fampiharana ity eo amin'ny milina.
Dingana voalohany: Zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba fampiasana ilaina rehefa ampiasaina amin'ny fanoratana. Eo am-piandohana voalohany, dia andrasana hanoratra sora-pandrefesana adin-tsokely kely ianao aorian'izay hahitanao ny hevitra ankapobeny momba ny zavatra tianao hatao sy ny fahatakarana mazava ny tanjonao farany. Mariho fa ny fitsipi-pitenenan-tsipika dia tsy maintsy mivantana tsy misy fepetra na fe-potoana.
Dingana faharoa: Ankehitriny dia manana fahatakarana mazava momba ny tari-dalana tokony alainao ianao ary ireo tranomboky ampiasaina. Izao no fotoana "hizaràna sy hanapaka"! Raha efa nahangona ireo fehezan-dalàna izay manao zavatra mitovy amin'izany ianao, dia apetraho eo amin'ny taranjam-pianarana. Ny tombony amin'ny famandrihana subroutine dia ny fahafahanao manova maromaro tsy misy fiantraikany amin'ny code hafa. Izany dia manome koa famelabelarana tsara kokoa.
Dingana fahatelo: Ity dingana ity dia ahafahanao manavaka ny codeo. Azonao atao ny manipulerina ny mari-pamantarana miafina rehefa mahazo ny traikefa ilaina. Ankehitriny, afaka miampita amin'ny famandrihana arahina amin'ny tarehimarika ianao, indrindra raha mampiasa fiteny mifantoka amin'ny sanda. Ny olona mampiasa fiteny karazana dia afaka manasaraka ny fampiharana amin'ny fonosana na / sy 'interfaces.' Nahoana ianao no tokony hampiasa izany fomba izany amin'ny fandaharana? Izany dia satria mila "toerana miaina" ianao, indrindra raha manoratra fampiharana be pitsiny ianao.
Taorian'ilay teoria, fotoana handehanana any amin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao. Ireto ny dingana ilainao hatao rehefa manamboatra tranokala:
Mamoròna lisitry ny lahatsoratra tianao hamboarina;
Tsindrio ny lisitry ny lisitrao ary alao ny URL manaraka.
Fintino ny votoatin'ny HTML HTML;
Voafidy ny valiny ao amin'ny tahiry HTML;
Manangona tahiry PDF avy ao amin'ny antontan-taratasinao raha vao manomana azy rehetra ianao;
Mora tahaka ny ABC ny zavatra rehetra! Alefaso fotsiny ny fandaharan'asan'ny tranonkala, ary dia ho vonona amin'ny asa ianao Source .